को आउने भयो ९४औं ओस्कर अवार्डको होस्ट ? « Harekpal
को आउने भयो ९४औं ओस्कर अवार्डको होस्ट ?
ओस्कर मनोनयनको घोषणा ८ फेब्रुअरीमा गरिनेछ । यो अवार्डलाई विश्वको दुई सयभन्दा अधिक स्थानमा देखाइनेछ । आयोजकका अनुसार ग्लेन वीस लगातार सातौंपटक अवार्डको निर्देशक हुनेछन् । विल पेंकर यो वर्षको एकेडेमी अवार्डको कार्यकारी निर्माता रहनेछन् ।